चिसोमा कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगिने ? - Health Chautari Health Chautari
७ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:५६
Published on : ७ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:५६
काठमाडौं– चिसो मौसममा भाइरसहरु थप सक्रिय हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो मौसममा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, स्वास फेर्न कठिन हुने जस्ता समस्या धेरैलाई हुने गरेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण हानीकारक भाइरसहरु थप सक्रिय हुनु नै हो ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेका बेला चिसो मौसममा थप जोखिम निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता कतिपयले गर्ने गरेका छन् । तर कोरोना भाइरस चिसो मौसममा थप सक्रिय हुने गरेको प्रमाण भने फेला परेको छैन । यो भाइरसका बारेमा अध्ययनहरु भइरहेकाले अहिले नै चिसो मौसममा बढी सक्रिय हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, अन्य भाइरस भने चिसो मौसममा बढी समयसम्म बाँच्ने सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
हावाका माध्यमबाट सर्ने भाइरस चिसो समयमा बढी सक्रिय हुन्छन् । चिसो मौसममा तापक्रम निकै घट्ने भएकाले यस्ता भाइरस धेरै समयसम्म जिवित रहने र संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ । तर कोरोना हावाका माध्यमबाट भन्दा नाक वा मुखबाट निस्किएका छिटाका माध्यमबाट सर्ने गरेको छ ।
अहिले चिसो मौसम भएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि वृद्धि हुँदै जाने सम्भावना भने रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । चिसो मौसममा मानिसहरु घरका झ्यालढोका बन्द गरेर बस्ने गर्दछन् । यसरी झ्यालढोका बन्दा गरिँदा हावा गुम्सिएर कोठाभित्रै धेरै समयसम्म रहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कोठामा धेरै जना वस्दा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सावधानी आवश्यक देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसका बारेमा अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै मौसम अनुसार यसको संक्रमण दर घट्छ वा बढ्छ भनेर भन्ने सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुको विकल्प छैन ।
कोरोनाको महामारी तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै अझ बढी सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
चिकित्सकहरुले भने जस्तै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सकिए जुनसुकै मौसम भए पनि कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सहयोग पुग्ने छ ।
शुक्रबार १० हजार १५१ सक्रिय संक्रमित, ६ जनाको निधन
कोभिड भएपछि भ्याक्सिन लगाउनेहरूमा ‘सुपरह्युमन इम्युनिटी’, जसले गर्छ बुलेटप्रुफजस्तै सुरक्षा
१६ सय ४० जनामा कोरोना पुष्टि, १० को मृत्यु
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. निरेश थापा नियुक्त
प्रधानन्यायाधीश इजलासमा: दुई मुद्दाको सुनुवाइ
बानेश्वरको मुल सडक भासियो! (फाेटाेफिचर)
विचौलियाहरु राजदूत बन्ने नेताहरुको घरदैलो चाहार्दै,भागबण्डामै अल्झियो नियुक्ति
न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा प्रधानन्यायाधीशबाटै संकटमा परेपछि ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार…
एसएलसीका बोर्ड फष्ट डा. उत्तम कृष्ण, जो हाँकिरहेका छन् प्रमुख…